हिमाल खबरपत्रिका | राणाकालीन सभाहल अझै उपयोगी
राणाकालीन सभाहल अझै उपयोगी
उचित संरक्षण पाए राणाकालीन दरबार र बैठक हलहरू अझै लामो समय देशलाई काम दिने अवस्थामा छन्।
पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहाल यो कामले ऐतिहासिक–पुरातात्विक महत्वका दरबार र सभाहलहरूको मौलिक सबलीकरण गर्न सकिने विश्वास बढाएको बताउँछन् । ऐतिहासिक दरबार र त्यहाँका बैठकहरूलाई भविष्यका लागि समेत हुने गरी मौलिक ढाँचामा सबलीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण गद्दी बैठक भएको उनले बताए । बाँकी भवन र सभाहलहरूको पुनर्निर्माण पनि यही रूपमा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पुरातत्व विभागले संयोजन गरेको यो परियोजनामा सांस्कृतिक संरक्षण सम्बन्धी अमेरिकी राजदूत कोष (एएफसीपी) को रु.७ करोड ५ लाख आर्थिक र मियामोटो ग्लोबल डिजास्टर रिलिफ (जीडीआर) को प्राविधिक सहयोग रह्यो । जीडीआर ऐतिहासिक भवनहरू बनाउन सघाउने जापानस्थित अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो ।
गद्दी बैठक, हनुमानढोका ।
वीरशमशेरपछिका राणा शासकहरूले भव्य बैठक कक्ष सहितको नियो–क्लासिकल शैलीका ठूल्ठूला दरबार बनाएका थिए । तीमध्ये कति नासिइसके भने कति अझै साबुत छन् । संरक्षण गरिएका भवन र सभाहलमध्ये धेरैजसो निजी स्वामित्वमा छन् । सरकारी स्वामित्वमा रहेका १०० वर्षभन्दा पुराना सभाहलमध्ये सिंहदरबारको दरबार हल (स्टेट हल) र ग्यालरी बैठक प्रसिद्ध छन् । निजी स्वामित्वमा रहेका याक एण्ड यती होटलको लालदरबार हल, शंकर होटलको लाजिम्पाट हल र डिल्लीबजार दरबारको हल अहिले दैनिक प्रयोगमा छन् । हात्तीसार दरबार (अहिले माया मानोर होटल) को बैठक हल सुरक्षित रहे पनि प्रयोगमा छैन ।
इतिहासकार पुरुषोत्तमशमशेर राणाका अनुसार, भव्य बैठक कक्ष सहितका नियो–क्लासिकल दरबारहरू बनाउनेमा वीरशमशेर अगाडि थिए । अहिले अस्तित्वमा नभए पनि उनले बनाएका सेतोदरबारको लालबैठक र ठूलो बैठक अति भव्य थिए । अहिलेको अन्नपूर्ण होटल सेरोफेरोमा ३७५ रोपनी जग्गामा बनेको सेतोदरबारको भुईंतलामा लालबैठक र माथिल्लो तलामा ठूलो बैठक थिए । तिनलाई बेलायती झाड्फानस, ठूल्ठूला ऐना, फर्निचर, गलैंचा, पर्दा, मार्बलले सजाइएका थिए । २२ फुट उँचाइ र १२ फुट गोलाइका आठ वटा सेता स्फटिकका खम्बाहरूले लालबैठकलाई अद्वितीय बनाएका थिए । १९९० वैशाखमा लागेको आगोले सेतोदरबार ध्वस्त भयो ।
‘दी रानाज् अफ नेपाल‘ पुस्तकबाट
चन्द्रशमशेरले सिंहदरबारसँगै ग्यालरी बैठक पनि बनाएका थिए । प्रा. मुकुन्द अर्यालका अनुसार, भित्ताहरू ऐनाले सजाइएकाले यसलाई पहिले ‘ऐना घर’ भनिन्थ्यो । चन्द्रशमशेरले विदेशी पाहुना आउँदा मेहफिल जमाउन र अरू बेला आफैं नाटक–नृत्य हेर्न र गीत–संगीत सुन्न सो भवन बनाउन लगाएका थिए । सिंहदरबारको बैठक हल जस्तै गरी सजाइएको ग्यालरी बैककको भुईंमा सयौं चितुवाको छालालाई १३ लाइनमा ओछ्याएर कार्पेट बनाइएको दी रानाज् अफ नेपाल नामक पुस्तकमा सचित्र उल्लेख छ । २००४ सालमा ‘नेपालको वैधानिक कानून’ बनेपछि ग्यालरी बैठकमा भारदारी सभा र २००७ सालपछि सल्लाहकार सभा यही ‘ऐनाको घर’ मा बस्न थालेको प्रा. अर्याल बताउँछन् । २०४८ सालपछि संसद भवनको रूपमा प्रयोगमा आएको ग्यालरी बैठक भवनलाई २०७२ को भूकम्पपछि ताला मारेर राखिएको छ ।
भीमशमशेरले आफ्नी बडामहारानी (सीतामाया तामाङ) का लागि सन् १९३१ मा सीतामहल बनाएका थिए । नक्सालस्थित सीतामहलको बीच तलामा रहेको भव्य बैठक हल अहिले लथालिङ्ग छ । नेपाल बाल मन्दिर र ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान रहेको सीतामहल २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि प्रयोगमा छैन । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका उपनिर्देशक राजु न्यौपानेका अनुसार सीतामहल, केशरमहल, बबरमहल, बालुवाटारस्थित नेपाल राष्ट्र ब्यांकको मुख्य भवन, राष्ट्र ब्यांकको कार्यालय रहेको थापाथली दरबार, श्रीमहल (पुल्चोक) जस्ता १०० वर्षभन्दा पुराना दरबारहरूको सबलीकरण योजना बनिरहेको छ । तिनमा रहेका बैठकहरूलाई पुरानै ढाँचामा सजाइने उनले बताए ।
३१ भदौ १९०३ को राति भएको कोतपर्वमा काजी वीरकेशर पाँडे मारिएपछि उनको लाजिम्पाट दरबार कर्णेल त्रिविक्रमसिंह थापा हुँदै वीरशमशेरको स्वामित्वमा गयो । भव्य दरबारहरूका सौखिन उनले १९४२ सालमा भाइ जीतशमशेरका लागि यसको पुनर्निर्माण गराए । पछि जुद्धशमशेरका नाति केन्द्रशमशेरको स्वामित्वमा आएको यो दरबार २०२१ सालमा रामशंकर श्रेष्ठले किने, जहाँ अहिले शंकर होटल छ । होटलमा २५० जनाभन्दा बढी पाहुना अटाउने लाजिम्पाट हल छ, जसमा पहिलेको आकर्षण कायम छ ।
दरबार बैठक ।
वि.सं. १९४२ मा वीरशमशेरले बनाएको लालदरबारको एउटा भागमा अहिले याक एण्ड यती होटल रहेको छ । २७० कोठा भएको यस होटलको मुख्य आकर्षण लालदरबार बैठक (हल) हो । यसमा थुप्रै परिवर्तन गरिए पनि पहिलेको स्वरुप कायम गरिएको छ । (हे. https://bit.ly/2NKN3YR)